Telegram: Akụkọ, ọrụ na uru ọ bara ugbu a | Site na Linux
Telegram 1.6: Gini bu ihe ohuru na ngwa kacha mma di nma
A na-ewere WhatsApp dị ka ngwa a kacha mara amara, zuru ebe niile ma jiri ya, na ikekwe ọ bụ, mana nke ahụ apụtaghị na ọ kachasị mma na ahịa ma ọ bụ nke kacha baa uru ma ọ bụ na-arụ ọrụ nke usoro okike niile nke ngwa izipu ozi dị. Telegram bu ezigbo uzo di iche iche di nma iji mee ka ndi ozo na WhatsApp.
Agbanyeghị, ndị hụrụ ụzọ ndị ọzọ n'anya, ohere dị iche iche, nke ugbu a nwere ihe dịịrị ha Ngwa ndị ọzọ dịka: ChatON, Facebook Messenger, Hangouts, KakaoTalk, Kik Messenger, Line, LiveProfile, Skype, Snapchat, Tango, Telegram, Viber, WeChat, Waya, na ọtụtụ ndị ọzọ. N'okwu anyị, anyị ga-elekwasị anya na Telegram, ngwa ma ọ bụ ọrụ izi ozi nke Pável Dúrov kere.
2.1 Kedu ihe bụ Telegram?
2.2.2 Ugbu a
2.3.2 Ọdịnaya na Ozi
2.3.3 Ndi ana-akpo na Akaụntụ
2.3.4 Nkata, Channels, Otu dị iche iche na otu dị iche iche
Telegram, wulitere elu n’oge na-adịbeghị anya site na itinye ndebanye ndebanye ndebanye aha ọhụrụ nde atọ, n'etiti oke Facebook, Instagram na WhatsApp mebiri. Kedu, na-ehota okwu nke onye okike ya, nke a makwaara dị ka «Russian Zuckerberg»:
Nke ahụ mara mma. Anyị nwere ezi nzuzo na ohere na-akparaghị ókè maka mmadụ niile.
Na nke anyị, na DesdeLinux Blog, ọ bụghị oge mbụ anyị na-ekwu okwu, na-atụ aro ma na-akuzi otu esi etinye ma jiri ngwa a. Ebe ọ bụ na anyị nwere akwụkwọ ndị gara aga banyere ya, dị ka: Etu esi etinye Telegram na Linux? nke David Naranjo na Ndụmọdụ iji wụnye Popcorn Time, Spotify na Telegram na DEBIAN nke odee.
Yabụ na akwụkwọ a, anyị agaghị elekwasị anya na teknụzụ miri emi, mana na ngwa bara uru, ya bụ, ozi, ọrụ, na uru kacha pụta ihe ruo ugbu a.
Kedu ihe bụ Telegram?
N'ihi na ndị na-kpam kpam na-amaghị nke a ngwa na izi ozi ọrụ, anyị nwere ike ime ka o doo anya na ozugbo, na-ezo aka gị gọọmentị webụsaịtị, nke bu:
Ngwa izi ozi lekwasịrị anya ọsọ na nchekwa, ọ dị oke ọsọ ọsọ, dị mfe ma dịkwa n'efu. Nwere ike iji Telegram na ngwaọrụ gị niile n'otu oge. Ejiri mmekọrịta gị na ozi gị site na ekwentị gị, mbadamba ma ọ bụ PC.
Site na Telegram, ị nwere ike izipu ozi, foto, vidiyo na faịlụ nke ụdị ọ bụla (doc, zip, mp3, wdg), yana ịmepụta otu ihe ruru mmadụ 200 ma ọ bụ ọwa iji kesaa ndị na-enweghị njedebe. Nwere ike idegara ndị kọntaktị ekwentị gị wee chọta ndị mmadụ site na aha aha ha. N'ihi ya, Telegram dị ka SMS na email jikọtara, ọ nwere ike izute mkpa nke onwe gị ma ọ bụ nke azụmahịa. Ọzọkwa, Telegram na-enye oku oku na nzuzo na njedebe.
Na ihe ọ bụla n'ozuzu ndọtị na kwuru na ngwa, ọ dị mma ịkpọ ozugbo ngalaba ajuju n'asụsụ Spanish, nke ị nwere na ebe nrụọrụ weebụ gị. Agbanyeghị na ekwesiri ịkọwa na na mbido Telegram bụ naanị obere ngwa ekwentị mkpanaka ma obere obere ka o guzobewo onwe ya dịka usoro siri ike dị iche iche siri ike ma sie ike, ya bụ, enwere ike iji ya rụọ ọrụ na sistemụ arụmọrụ (Android, iOS, MacOS, Windows, GNU / Linux) na ihe nchọgharị weebụ (Chrome, Firefox, Opera, na ndị ọzọ).
Emepụtara na 2013, Telegram ugbu a na ụdị desktọọpụ ya maka GNU / Linux dị na nsụgharị 1.6.2 yana na gam akporo mkpanaka ọ dị na nsụgharị 5.5.0. Ọ na-eji teknụzụ MTProto na akụrụngwa ya yana gụnyere n'etiti ọrụ ndị ọzọ na ụdị ọrụ ọ bụla ọzọ, ụdị pụrụ iche na / ma ọ bụ nke ọhụụ dịka ojiji nke akwụkwọ mmado (decals) na bots (akpaghị aka na customizable robots), na ọnụ ọgụgụ na-eto eto na-abawanye ma na-ewusi ogo njirimara onye ọrụ na ya.
Ugbu a Telegram n'ụdị ya dị iche iche maka ikpo okwu ọ bụla (Desktọpụ, Mobile, Weebụ) gụnyere ma ọ bụ na-etinye atụmatụ ndị a:
Ọhụrụ na otu njikwa njikwa njikwa: Kedu n'ime ihe ndị ọzọ na - enye gị ohere iji nyocha ahụ na ntọala iji chọta nhọrọ na aro sitere na ajụjụ a na-ajụkarị.
Njikwa ka mma nke Emojis: Mgbe ọ bịara n'ike, chọọ emojis, GIF na akwụkwọ mmado na panel emegharịrị. Nweta emoji site n'okwu mbụ ị pịnyere na ozi. Lelee emojis ndị ka ukwuu na ozi nwere naanị emojis ma chọọ ihe mmado na-eji okwu (dabere na emoji kachasị mkpa).
Gbasaa ozi njikwa: Ugbu a arụ ọrụ nke ihichapụ ozi gbasaa, na-eru mkpochapụ ozi ọ bụla maka ma ndị ọrụ na nkata nzuzo ọ bụla, mgbe ọ dị mkpa. Na ijikwa ma ozi anyị ga-ejikọ na akaụntụ anyị mgbe ebugharị.
Akpaka video playback: Ọ na - enye gị ohere igwu vidiyo na - enweghị nbudata ha ma kpọọ ndị pere mpe na - enweghị ụda mgbe egosiri ha na ihuenyo, yana nhọrọ nke ịmegharị ụda ahụ, naanị site na ịpị bọtịnụ olu nke ngwaọrụ ahụ. Enwere ike ịlele gifs na ozi vidiyo na-echeghị ka ebudata ha kpamkpam.
Akpaghị aka downloads: Na-enye gị ohere iji aka gị hazie nbudata na-akpaghị aka site na ụdị nkata, ụdị mgbasa ozi na nha faịlụ. Icheta nhọrọ ndị edobere dị ka ihe eji eme omenala ka ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe nwa oge ka ọ dị ala na nke ọzọ, ma ọ bụ na ntụgharị.
Otutu nkwado akaụntụ: Tinye nkwado maka ibikọ ọnụ nke ọtụtụ nọmba ekwentị na ọtụtụ akaụntụ Telegram na otu ngwa (Desktọpụ, Mobile, Weebụ), wee si otú a kwado njikwa na ndekọ aha ọtụtụ na mkpokọta.
Ọrụ ọrụ nnọkọ njikwa: Ọ na-eme ka omume nke ịpụ apụ, ọ bụghị ihe dị mkpa ma baa uru karịa Telegram, site na ịmepụta menu ngosipụta gosipụtara ugbu a ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ iji mechie nnọkọ na-arụ ọrụ.
Foto profaịlụ: Ugbu a Telegram na-enye onye ọrụ ọ bụla ohere ịnweta foto profaịlụ 2. Otu maka kọntaktị edebara aha na otu dị iche maka ndị ọzọ. Nke bụ mgbakwunye ọzọ na nhọrọ nhọrọ iji zoo foto profaịlụ nke anyị nwere ike ịchọta na ngwa ngwa ozi ndị ọzọ. Ọ na-enyekwa anyị ohere ịchịkwa onye nwere ike ịhụ foto profaịlụ anyị.
Izipu ozi: Ọ na-enyere ọrụ iziga ozi sitere n'aka onye machibidoro ime ya. Imeputa otu ya zigara, ọ gụnyeghi ohere ịnweta profaịlụ onye edemede yana igosipụta eziokwu ya. Na mgbakwunye, enwere ike kwụsị njirimara nke onye ọrụ na ozi ebugharị, ebe ọ bụ ozi ebugharị.
Ndị ọzọ dị mkpa: Gbanwee ihuenyo iji gbanwee gaa na ọnọdụ ihuenyo zuru oke mgbe ị na-elele vidiyo na-akpaghị aka na ụda. Jiri TalkBack nweta akụkụ nke ọ bụla nke ngwa ahụ. Na ndozi na ogo nke oku mere.
Ugbu a Telegram n'ụdị ya dị iche iche maka ikpo okwu ọ bụla (Desktọpụ, Mobile, Weebụ) nwere ọrụ ndị a (njirimara):
Kpọọ oku, zipụ ozi olu na ozi vidiyo.
Tinye ngwa ahụ site na koodu PIN ma ọ bụ mkpịsị aka.
Hazie mkpọchi akpaaka maka oge ụfọdụ.
Nkwado akpaaka usoro site na teknụzụ IFTTT.
Na-agagharị na withoutntanetị na-ahapụghị ngwa, ekele gị onwe gị n'ime ihe nchọgharị weebụ.
Anata pushma Ọkwa na ike hazie ha ọ bụla edebanyere kọntaktị.
Nhọrọ nchebe iji jikwaa: Onye nwere ike ịhụ njikọ ikpeazụ anyị? na onye nwere ike tinye anyi na otu? igbochi ndị ọrụ ma hazie nhọrọ ndị ahụ.
Ojiji nke Telegraph, iji mepụta ederede (ozi ogologo / ogologo) iji kwado izipu ha na nlele ha (Ndenye anya) site na nkata ma ọ bụ ọwa.
Ziga ọnọdụ anyị n'oge, ka ndị ọzọ nwee ike ịmata ọnọdụ anyị kpọmkwem maka oge akọwapụtara X.
Mmekọrịta oge niile nke ọdịnaya na igwe ojii (Intanet) maka ịdị mfe na ozugbo ịnweta ya site na ngwaọrụ dị iche iche ejiri.
Mmemme ụdị faịlụ ga-ebudata na akpaaka dabere na ụdị ọwa njikọ Internetntanetị (Wired, Mobile ma ọ bụ Wi-Fi), iji nyere aka belata obere data ma jikwaa njikwa ihe ejiri.
Chọọ ozi site na ụbọchị, site na otu nkata, site na ịpị ntọala / ọchụchọ / kalenda. Ngwaọrụ magburu onwe ya maka ichota ihe ochie.
Ngwaọrụ na-akwadoghị nke na-etinye usoro ọrụ ndị na-esighi ike, mana nke ahụ na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ ọhụụ dị na ngwa ngwa.
Ojiji nke bot (akpaghị aka na omenala customized) kwadebere iji kwado ọrụ ọ bụla. Gụnyere ịdị adị nke obere egwuregwu, ụfọdụ n'ime ha nwere ezigbo mma, n'ihi ọfụma bot mara mma, ọkachasị bọọlụ @gamebot na @gamee.
Telegram enweghị ma ọ nwere ike ọ gaghị enwe mgbasa ozi, ebe WhatsApp nwere ike ịgụnye ya n'oge ọ bụla n'ihi na ọ bụ ngwa azụmahịa ma nwekwaa ụlọ ọrụ Facebook.
Na-enye ohere ngbanwe akpaka iji rie (budata) obere data maka ndị ọrụ bi na mba nwere ụgwọ data dị elu. Na-agbakwunye ikike ịlele ma gbanwee n'etiti ụkpụrụ dị ala, ọkara na elu dị ka ọnọdụ nbudata rụọ ọrụ (Mobile, Roaming and Wi-Fi).
Ọdịnaya na Ozi
Dezie ma hichapụ ozi ndị ezitere.
Mee ọchụchọ ụwa zuru ụwa ọnụ na ọdịnaya.
Zọpụta ọdịnaya nke mkparịta ụka ahụ, tinyere akụkọ ihe mere eme.
Jikwaa mmegharị, ọdịyo, onyonyo, ederede na vidiyo vidiyo, rue 1.5 GB, ha niile sitere na interface dị mfe ma dakọtara.
Chekwaa ozi ederede, bara uru iji bido ozi, dịka ọmụmaatụ, na ekwentị mkpanaaka, ma mechaa ya na kọmputa ma ọ bụ ekwentị ọzọ ma mesịa zipụ ya.
Zọpụta ozi nhọrọ, nke-enye gị ohere ikori na onwe gị, ma si otú auto-eziga niile ụdị faịlụ ngwa ngwa ma mekọrịta ya n'etiti niile ngwaọrụ.
Ndi ana-akpo na Akaụntụ
Jiri akwukwo eji eji aka na enweta ndi Telegram.
Tọ oge na akpaaka-ebibi ma ọ bụ gbochie Telegram akaụntụ mgbe oge arụghị ọrụ, nke nwere ike ịdị site na otu ọnwa ruo otu afọ.
Jiri aha ọzọ na-abụghị Aha ahụ, ma jiri otu ihe ahụ chọta ndị ọzọ ma nwee ike ịgwa ha okwu ozugbo. Nke a na - egbochi inye nọmba ekwentị anyị ka ha kpọọ anyị ma emechaa chọọ ime ya.
Na-akpakọrịta foto foto na profaịlụ profaịlụ nke akaụntụ ọ bụla ma hụ foto ndị gara aga bụ ndị guzobere.
Jiri otutu akaụntụ (ihe ruru nọmba ekwentị 3) wee gbanwee n'etiti ha na-enweghị ịkwụsị. Na mgbakwunye na ịnweta ọkwa mmapụta (push) maka akaụntụ niile ahaziri yana ozi gbasara akaụntụ ahụ ezigara ya. Ma nweta nlele nke ndepụta nkata nke akaụntụ, site na ịpị aka na ijide ya na ngalaba ntọala.
Nkata, Channels, Otu dị iche iche na otu dị iche iche
Mejuputa usoro mgbasa ozi, ndi otu na ndi otu. Ndị a nwere ike ịbụ nke ọha ma ọ bụ nkeonwe, na nke ikpeazụ ga-enweta site na njikọ ịkpọ òkù (URL), enwere ike ịhazi ya, ọ bụrụ na otu a bụ ọha.
Mara otu dị iche na ụfọdụ ndị ọrụ ndị ọzọ ma chọọ otu dị iche iche site na ngalaba ọchụchọ.
Idozi (arịlịka) ozi na nkụnye ndị eji isi mee nke gị ma ọ bụ jisiri ọwa na otu. Ọ na-agụnye inwe ike arịlịka ke akpa ọnọdụ nke chat ndepụta na a kpọmkwem chat.
Mepụta mkparịta ụka nzuzo na iji ohere izipu ozi na oge mbibi onwe gị, na izipu foto, gifs ma ọ bụ akwụkwọ mmado na ụbọchị mmebi.
Gbanwee akwụkwọ ahụaja nke Nkata ma tinye gburugburu isiokwu maka ngwa ahụ. Gụnyere ikike ịmepụta nke anyị, ọ bụrụ na anyị enweghị mmasị na nke ọ bụla n'ime ndepụta sara mbara nke isiokwu dị.
Dee ozi n’atụghị egwu ma ọ bụ italiki nanị itinye n’ihu na mgbe mkpụrụ okwu / nkebi okwu ọ bụla gasịrị, akara mmuke abụọ (**) maka nkwuwa okwu, mkpirisi (__) maka mkpụrụedemede italita na mkpụrụokwu atọ (‘’) maka monospace.
Hazie oke ederede, site na nha 12 ruo 30, maka ndị na-ahọrọ ederede na mkpụrụedemede nwere nha nha.
Na-agbanwe foto na-akpaghị aka na nha ụfọdụ na usoro akọwapụtara.
Tinye ma ọ bụ mepụta akara ngosi (akwụkwọ mmado), nke gị ma ọ bụ ndị ọzọ.
Lelee vidiyo YouTube na windo na-ese n'elu mmiri, ekele maka Foto dị na ọnọdụ Foto.
Jiri Telegram dị ka ihe ọkpụkpọ multimedia (Audio / Video), na-enye gị ohere igwu ọtụtụ faịlụ n'otu oge na akaghị ma ọ bụ enweghị usoro.
Ziga otu foto ma họrọ usoro iji zipu ha, na ịpị ha iji jikwaa nọmba ndị na-egosi usoro nnyefe.
Mepụta Onyinye sitere na vidiyo ezigara, na-ezipụ vidiyo ma mechie ya, wee chekwaa ya dịka faịlụ Gif. Chọọ ha n'ime nkata site na ịpị akara akara (:) tupu okwu ejikọtara.
Jiri nchịkọta akụkọ foto nke na-enye ohere, n'etiti ọtụtụ ihe, iji gbanwee nchapụta, agba, iche, blur ma gbakwunye vignettes. Na mgbakwunye na ịgbakwunye ihe ndị dị ka iko, okpu, wigs na ụdị mgbakwunye dị iche iche na onyonyo e mepụtara na ihu anyị site na iji teknụzụ mmata ihu.
Na nkenke nchịkọta anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ngwa:
Na ọ bụ mgbe niile na-ebute ụzọ ngbanwe, ọrụ na mmezi ndị dị mkpa ma ndị obodo rịọrọ ya. Karịsịa n'ogo nke atụmatụ nzuzo na nke nchekwa.
Ọ bụ nke Russia na ọ bụghị North America sitere, nke na-egosi mgbakwunye nchekwa na nzuzo, gbasara ọrụ dị n'okwu a nke gọọmentị North America nyere na ọkwa mba ụwa.
Ọ na-erepịakwa obere akụrụngwa, obere batrị, obere nchekwa ebule nke kọmputa na ngwaọrụ ebe arụnyere ma ọ bụ na-agba ọsọ.
Onye API na usoro nkwukọrịta ya nwere "n'efu" (Isi mmalite) ma ọ bụ n'efu.
Telegram, kemgbe mmalite ya, nwere ọtụtụ nhọrọ, ndozi na ngwaọrụ karịa WhatsApp. Ma ugbu a, n'agbanyeghị na ọ bụghị ngwa na-eduga site na ndabara na ahịa, na ngwaọrụ, ma ọ bụ site na ndị ọrụ, ojiji ya, nnabata na nnabata nke ụwa zuru ụwa ọnụ na-etowanye kwa ụbọchị, ọkachasị maka ụkpụrụ ndị bụ isi dị ka nnweta. , oge a, ihe ohuru, nchekwa na nzuzo.
Ka o sina dị, ugbu a ị maara karịa Telegram, anyị na-akpọ gị òkù isonye, ​​wụnye ya, nwalee ya ma kwalite ya n'etiti kọntaktị gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Telegram: Akụkọ, ọrụ na uru ruo ugbu a
Kedu ihe m ga-agbakwunye na nnukwu edemede a? Na onye ọ bụla chọrọ ma ọ bụ chọọ ịmata ihe Telegram bụ, ka ịgụ ya.
Dị ka mgbe niile, ana m ekele gị nke ukwuu maka okwu ọma gị, obi dịkwa anyị ụtọ na ọ masịrị gị. Enwere m olile anya na ọ ga-eje ozi ka ọtụtụ ndị ọzọ mara ya ma jiri nwayọ na-akwaga ya na nso nso.
ezigbo ngwa, ma…. Ekwenyeghị m na isi 2 nke uru, ọ nweghị nchekwa ma ọlị, kpọmkwem n'ihi na ndị Russia dị ka ndị ohi ma ọ bụ karịa karịa Yankees, yabụ, ọ bụrụ na ị na-ekwu maka nchekwa, agaghị m etinye aka m n'ọkụ n'oge ahụ.
Aghọtara m ma kwanyere echiche ahụ ùgwù ... Naanị ihe m ga-eme bụ ịkwado ihe m na-arụ ụka, na dịka m maara, onye okike na itinye ya n'ọrụ n'agbanyeghị na ha bụ ndị Russia, otu ndị ọchịchị Russia ahụ busoro ya agha n'ihi na ha ekwenyeghị n'ihu ọha na otu ihe ahụ, iji nwee ike ịnweta ozi nke ndị ọrụ na ụzọ gọọmentị, nke a na-apụghị ichetụ n'echiche ma ọ bụ kwenye na n'akụkụ nke ọzọ na ngwa izipu ozi ọ bụla, n'ihi na dịka anyị niile chere, n'ọchịchị ma ọ bụ na ọ bụghị, ha nweta ma ọ bụ ha agaghị ekwe ka ha rụọ ọrụ, ka ha na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu ma ọ bụ mkpa taa. Yabụ ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na Telegram enyeghị gọọmentị gọọmentị gọọmentị nchebe na nzuzo, ọ dịkarịa ala uru nke obi abụọ nwere, ọ dị mma?
Ezigbo isiokwu. Maka m Telegram bụ ngwa ozi kacha mma ugbu a.
Maka mụ onwe m, ọ bụrụ na m ga-ekwubiga okwu ókè na nzuzo na nchekwa m ga-eji mgbaama.
Amaghị m mgbaàmà. Aga m anwale ya.
Enwere m Telegram ogologo oge, mana eziokwu bụ, anaghị m eji ya. Otherbọchị gara aga m banyere wee hụ na m nwere kọntaktị na Telegram onye m na-amaghị onye ọ bụ, ọ nọghị n’akwụkwọ ekwentị m, amaghịkwa m onye ọ bụ, Ndị ana-akpọ niile nọ na mkpụrụedemede ojii na nke a dị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na amaghị m onye ọ bụ. ma ọ bụ olee otu m si rute ebe ahụ. Onwere onye ga agwa m otu esi etinye ya na kọntaktị Telegram m? Daalụ.
Zaghachi Rafa Vidal
Daalụ Rafa! Ejighi m n'aka, ikekwe ọ bụ kpọmkwem na, na ọ bụ onye ọrụ amaghị, yabụ, ịnweghị ya na ndekọ ndekọ gị wee pụta na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Na na o tinyere gị site na aha njirimara, ọ bụghị site na nọmba ekwentị gị. Ajuju ọ bụla, njikọ a bụ ebe kachasị mma ịmalite: https://telegram.org/faq/es
Firefox 66 batara na igbochi vidiyo autoplay na ndị ọzọ
Solus 4: mbipute ọhụrụ nke distro na mgbanwe na Budgie na nchịkọta ndị ọzọ